Farmaajo oo fowdo hor leh u faro-laabtay | KEYDMEDIA ENGLISH
Farmaajo oo fowdo hor leh u faro-laabtay
Farmaajo ayaa doonaya inuu tijaabiyo is-eddel guud oo uu ku sameeyo, hab qeybsiga kuraasta ugu sarreeya dalka ee MW, RW iyo GB.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynihii hore, Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa wada qorshe, uu doonayo inuu ku abuuro qalalaasa siyaasadeed oo hor leh, kadib markii uu ku fashilmay inuu hor istaago doorashada baarlamaanka 11-aad ee JFS, taasoo uu garwadeyn ka yahay Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta, Maxamed Xusseen Rooble.
Xogo muhiim ah oo Keydmedia Online, ka heshay xaafiiska Farmaajo, ayaa sheegaya in Kooxda waqtigu ka dhamaaday, ay dooneyso in ay is-beddel ku sameeyaan owood qeybsiga siyaasadeed ee ku aaddan kuraasta waaweyn ee heer Federaal, taas oo tan iyo dib u yabyabkii dowladnimada ku socotay jahalo la isla oggol yahay.
Farmaajo, wuxuu doonayaa inuu dadaalkiisa ugu badan galiyo in kursiga Guddoomiyaha Golaha shacabka ee Baarlamaanka JFS, uu saaro, shaqsi magaciisa lagu sheegay, Maxamed Daahir, oo ka soo jeeda beesha Hawiye, gaar ahaan Xawaadle, kaas oo hadda ka mid ah musharixiinta kuraasta u raadsaday Baladweyne.
Maxamed Daahir, wuxuu hadda u sharraxan yahay, kursiga HOP063 oo baarlamankii 10-aad uu ku fadhiyay Wasiirkii hore ee Wasaaradda Waxbarashada Cabdullahi Goodax Barre, kaas oo sanadkii tagay si weyn kaga soo hor jeeday Farmaajo iyo Kooxdiisa, inkastoo Saddex sano iyo ka badan uu kabo-side u aha.
Qorshahaan, waxaa sidoo kale, gadaal ka riixaya Madaxweynaha Koofur galbeed Cabdicasiis Lafta-gareen, oo ay isku hooyo yihiin Maxamed Daahir, Lafta-gareen, waxaa loo ballan qaaday in Ra’iisul Wasaare la siin doono ama qof uu isago keeno loo magacaabi doono.
Farmaajo, wuxuu hore Madaxweynayaasha Galmudug iyo Koofur galbeed, ula wadaagay, in ay kala qaataan xilka Ra’iisul Wasaaraha iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka, sida ay u kala horreeyaan, hayeeshee, waxaa muuqata inuu markaan muhiimad gaar ah siinayo, sidii uu tijaabin lahaa is-beddel guud oo ka dhaca saddexda kursi ee ugu sarreya dalka.
Dastuurka iyo xeerarka dalka u yaalla, meelna kagama qorna in Hawiye iyo Daarood kala qaataan xilalka MW iyo RW, isla-markaasna ay Raxanweyn qaadato xilka Af-hayenka baarlamaanka, hayeeshee, waa dhaqan siyaasadeed dhowran oo lagu dhaqmayay 22-kii sano ee la soo dhaafay.
Qorshahaan uma muuqdo mid hirgali kara, riyo maalmeed, ayayna ku tilmaamayaan dadka siyaasadda u dhuun duleela, hayeeshee, waxaa la fahansan yahy in Farmaajo leeyahay dhaqan siyaasadeed, xasarad abuur iyo xiisad kicin ku suntay oo wax waliba ka suuroobaan.